FAQ - Sand pombi, Sump Pump, Gravel Pump Manufacturer
muenzaniso siyana ane zvakasiyana mutengo .we achasarudza muenzaniso sezvo paminiti ari parameters iwe zvinopa. uye ipapo isu kutaura uye kuita chibvumirano .so pls kutanga kugadzirira parameters.
Kwete, hatina kuti Odha uwandu. dzimwe nguva chete unofanira kutakura mitoro Port yako, saka pakutanga pls tarisa mitoro mubhadharo forwarder wako.
Hongu, tine simba dzichiri chikwata. The zvinogona kuitwa maererano request.you wako anogona kutuma ini mufananidzo uye tinogona kuzviita se pa.
Chokwadi, tinogona kupa mapepa akawanda kusanganisira Zvitupa Analysis / Conformance; Insurance; Origin, uye dzimwe ekisipoti magwaro apo required.also rehurukuro mufanidzo uye kuyambuka sectional mufanidzo.
Nokuti mimwe, kutungamirira nguva anenge 7 days. Nokuti vakawanda kugadzira, kutungamirira nguva mazuva 20-30 mushure mekugamuchira dhipoziti muripo. Kutungamirira nguva vanobudirira kana (1) zvatakawana dhipoziti wako, uye (2) tine chokupedzisira mvumo yenyu zvinhu zvenyu. Kana kwedu kutungamirira nguva haashandi wava yako, tapota endai pamusoro wako zvinodiwa ne Kutengeswa wako. Muzviitiko zvose tichaedza achengete zvaunoda. Kazhinji tinokwanisa kuita so.we zvakawanda kupembedza zvikamu kudanda, saka pakukurukura nguva dzimwe nguva hazvisi nyore.
50% dhipoziti pachine, 50% mwero pamusoro kopi B / L. isu vanosarudza TT muripo mazwi .also L / C zvakanaka.
vamwe migove, tinopa garandi mugore rimwe, asi nokuda wetted zvikamu, kazhinji zvichava 3-6months .this kunobva siyana nokushanda ezvinhu
Hongu, isu nguva dzose kushandisa yepamusoro ekisipoti packaging.we vave kwekurasira ichi kweanenge makore 16, saka, musafunganya pamusoro pasuru.